प्राधिकरणभित्र समेत बिजुली नभएकोमा पूरै 'ह्यु एन्ड क्राइ' छ। तर, १० वर्षसम्म १४ मेगावाटको कुलेखानी ल्याउन सकेको छैन। चमेलियाको हालत त्यस्तै छ। नयाँ कुनै परियोजना थालेको पनि छैन। यो त एकदमै नाजुक अवस्था भयो। यस्तो अवस्थामा समेत परियोजना नबन्नुको कारण के त? जवाफ त फेला पर्दैन। अनि परियोजना ढिला गर्दा कसै न कसैलाई फाइदै पुग्या होला।
त्यसो त नभनौँ। मलाई सिस्टम म्यानेज गर्यो भने हुन्छ भन्ने लागेर गरेको हुँ। कुनै जादू गरेको होइन। हिजोको नेतृत्वले सिस्टमै नबुझेर पनि यसमा 'प्रपर म्यानेजमेन्ट' नभएको हुन सक्छ। मभन्दा अघिको एमडीको कुरा गर्दा उहाँ सिभिल ब्याक ग्राउन्डको हुनुहुन्थ्यो। यहाँ गर्ने इलेक्ट्रिकल व्यवस्थापन हो। त्यसमाथि उहाँ बाहिरबाट आउनुभयो। यहाँ आउनु अघि प्राधिकरणभित्रको सिष्टम नै उहाँलाई जानकारी थिएन।
मेरो योजना सफल भएमा प्राधिकरणलाई अर्को वर्ष नै नाफामा लैजान्छु भनेर सार्वजनिक रुपमै भनेको छु। अहिले १२ अर्ब सञ्चित मुनाफा रहेको संस्थालाई नाफामा लगिन्छ भन्ने मेरो हिम्मत हो। कतिले यस्तो चमत्कार संभव छ भनेर सोधेका पनि छन्। तर केही चमत्कार नगरी त अहिलेको हाम्रो अवस्था कसरी सुध्रन्छ र? 'टार्गेट' नै नराख्ने, ए हुँदैन भनेर बसेर त कहाँ पुगिन्छ
कारणबश कुनै प्लान्ट बन्द भयो भने त्यो महिना दिनसम्म त्यत्तिकै रहन्छ। प्लान्ट बन्द हुँदा त सम्बन्धित म्यानेजरलार्इ पोल्नु पर्यो। म चिलिमेमा हुँदा एक दिन पावर हाउस बन्द हुँदा आज ३० लाख खोलामा बग्यो भन्ने लाग्थ्यो। यत्रो संस्था र संरचनामा त झन् कहिँ न कहिँ स्पिल भइरहेको हुन्छ। त्यो अपनत्व सबैले लिइदियो भने त समस्या सुल्झिहाल्छ। सेल्स म्याक्सिमाइजेसन र कष्ट मिनिमाइजेसन हुन्छ
मेरो योजना सफल भएमा प्राधिकरणलाई अर्को वर्ष नै नाफामा लैजान्छु भनेर सार्वजनिक रुपमै भनेको छु। अहिले १२ अर्ब सञ्चित मुनाफा रहेको संस्थालाई नाफामा लगिन्छ भन्ने मेरो हिम्मत हो। कतिले भनेका पनि छन्‍- यस्तो चमत्कार संभव छ? तर केही चमत्कार नगरी त अहिलेको हाम्रो अवस्था कसरी सुध्रन्छ र? 'टार्गेट' नै नराख्ने, ए हुँदैन भनेर बसेर त कहाँ पुगिन्छ?
कष्ट मिनिमाइजेसनमा अरु पनि कुराहरु छन्, जस्तो भेहिकल म्यानजमेन्ट भयो, स्टाफ म्यानेजमेन्ट भयो, खरिदसँग सम्बन्धित कुरा भयो। त्यसपछि वित्तीय पुनर्संरचनाका कुरा छन्। प्राधिकरणको बक्यौता उठाउनेदेखि 'म्यासिभ' रुपमा चुहावट नियन्त्रणसम्मका योजना छन्। हामीले एक प्रतिशत बिन्दुले चुहावट नियन्त्रण गर्दा ५० करोड रुपैयाँ नाफा हुन्छ। अहिले २६ प्रतिशत चुहावट छ। यसलाई ५/६ प्रतिशत बिन्दुले मात्र हटाउन सक्दा साढे दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुन्छ।